Iibso Duubista & Socodka Makarafoonka USB Laptop & Kombiyuutarro - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Duubista & Qulqulka Makarafoonka USB ee Laptop & Kombiyuutarro
$ 84.99 qiimaha joogtada ah $ 88.99
maraakiibta From Russian Federation SPAIN United States Shiinaha
Xiriirka Ruushka / Madow SPAIN / Madow Mareykanka / Madow Shiinaha / Madoow Xiriirka Ruushka / Qalinka SPAIN / Qalin Mareykanka / Silver Shiinaha / Qalin
Duubista & Qulqulka Makarafoonka USB ee Laptop & Kombiyuutarrada - Xiriirka Ruushka / Madow gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: K670
Codsiga: youtube/diiwaanka codka/podcast/barashada internetka/ciyaarta
Nooca: USB mike/microphone computer/mic mic
Jawaabta Soocelinta: 50Hz-15kHz
Dareenka: -46 ± 3dB (at 1kHz)
Saamiga S/N: ≥75
Xilliga Tabarta: 90mA
Makarafoonka wax lagu duubo wuxuu leeyahay jaakadda madaxa dhegaha ee 3.5mm, taas oo kuu oggolaanaysa inaad dhegeysato wax kasta oo aad duubayso iyada oo aan wax dib -u -dhac ah lahayn si aad u hubiso abuuris siman
Koontaroolka jirka ee ku habboon hagaajinta heerka soo-gelinta saxda ah, heerka codkaaga ayaa si fudud loo xakamayn karaa haddii aad podcast-ka, sheekaysiga xafladda, duubista cod-bixiyeyaasha, ama xitaa ku qulquleyso Twitch.
Ciriiriga-weyn ee muruqa-dhejiska mic-core wuxuu bixiyaa awoodda qabashada dhawaaqa tayada leh, wuxuu qabsan karaa codkaaga oo nadiif ah mar kasta oo aad qulqulieyso/sheekeysaneyso fiidiyaha/duubista cod-weyneyaasha ama nooc kasta oo kale oo duubis ah.
xarunta hoose ee cuf -isjiidka iyo miiska mashiinka biraha oo la kala qaadi karo oo siinaya makarafoonka cimri dhererkiisa iyo dabacsanaantiisa, 3 tuubooyin istaag oo la tegi karo ayaa si fudud loo soo ururin karaa oo kor loogu qaadi karaa dhererka 1.97 ”ilaa 4.65”. mic istaag.
Cable USB-Xawaaraha Sare wuxuu dhererkiisu yahay 6.56 'oo aan lahayn xog lumis! Laba -gaashaan -kabka USB -ga wuxuu yareeyaa faragelinta. Xiriiro si farsamo leh loo farsameeyay si loo hubiyo isgaarsiinta xogta xawaaraha sare leh. Isku xirnaanta deg -degga ah oo aan xuduud lahayn ayaa ah naqshadda ugu habboon makarafoonnada USB -ga.
S: Tan ma loo adeegsan karaa Playstation -kii ugu dambeeyay ama Xbox?
J: Waxay la shaqayn kartaa PS4, laakiin kuma shaqayn doonto Xbox 1.
S: Makarafoonkani ma wuxuu u baahan yahay il awoodeed oo dibadeed mise fiilada USB waa isha korontada?
J: Makarafoonka waxaa bixiya korontada 5 V USB, looma baahna ilaha korontada dibadda.
S: Kani ma leeyahay dalool 1/4 ah si uu u isticmaalo celcelis kasta haysta makarafoon ama gacan fidsan?
J: Waxay la timaadaa 5/8 '' lab ilaa 3/8 '' adabtarada dheddigga oo isku xiri kara gacan kororka ama hayaha.
S: Maxay ku kala duwan yihiin K669 iyo K670, marka laga reebo naqshada?
J: K670 wuxuu leeyahay jaakada la socoshada madaxa. Farqiga ugu weyni waa kaabsoolka makarafoonka. Cabbirka K670 waa qiyaastii 16mm, aad buu uga weyn yahay K669. Isha codka ee hortaagan K670 waxay u muuqan doontaa mid ka sii weyn, soo jiidasho leh.
S: Mikrafoonkan si toos ah looguma dhejin karo af-hayaha iyadoo la isticmaalayo saf-gelinta?
J: Waan ka xumahay, maya. In kasta oo aad ku dhejin karto makarafoonka kombuyuutarkaaga, ka dibna isticmaal fiilo maqal ah si aad ugu xirato jaakadda taleefanka madaxa ee gadaasha makarafoonka oo leh khadka afhayeenkaaga.
1*Mikrofoon leh buur -buur
1*Istaag miiska la hagaajin karo (oo ay ku jiraan 3 tuubooyin taagan oo la tegi karo oo ka sarreeya 1.87 "ilaa 4.56")
1*Fiilada USB Rin ilaa B lab ah
1*5/8 lab ilaa 3/8 adabtarada dumarka
Shaqadu ma hubin
Geynta guriga. Tayada makarafoonka, culus. Dhawaaqa Skype waa mid aad u cad. Wanaagsan in la isticmaalo. Wuxuu ahaa sanduuq si xun u xiran
Waxaa la amray 18 -kii August. Si fiican baa loo xirxiray. Mikrafoonka laftiisa, iyada oo aan wax dhaawac ah soo gaarin. Tayada duubistu si buuxda ayay iigu habboon tahay. Gaar ahaan qiimaha noocaas ah. Dhibaatooyinka, codka rollers fiidiyaha, ama kaliya ku -fadhida khilaafka ayaa si fiican ugu habboon. Marka, shaqsi ahaan, gabi ahaanba waan faraxsanahay.
Badeecadu waxay ku timid gobolkayga wax ka yar 30 maalmood, si aad u fiican baa loo soo buuxiyay. Wali lama tijaabin, laakiin waxay u muuqataa badeecad tayo fiican leh.
Helay badeecada si fiican loo buuxiyey, si fiican loo ilaaliyo. In kasta oo aan hore ugu riyaaqay badeecada, haddana waxaan samaynayaa tijaabooyin waxaanan moodaa in wax walba ay ku habboon yihiin in la isticmaalo kuwa bixiya makarafoonka.